Wiilka Madaxweyne Garguurte oo sharaxay sababaha uu London u joogo
Topnews:-Wiilka Madaxweyne Garguurte oo sharaxay sababaha uu London u joogo
14 July 2013 Waagacusub.com-Wiilka Madaxweyne Garguurte uu dhalay ee lagu magacaabo Mohamed Hassan Sheekh Mohamud ayaa beeniyay inuu magangalyo weydiistay dalka Ingiriiska.
Mohamed Hassan Garguurte oo la hadlay qof ka tirsan Waagacusub wuxuu tibaaxay inuu London u joogo sidii uu iskaga diiwaangelin lahaa Jaamacad ku taal Ingiriiska.si uu Master uga diyaariyo.
"Waxaan heystaa Visa lix bilood sidaas ayaan Ingiriiska ugu hakaday si aan Jaamacad ku taal gobol ku dhaw London iskaga diiwaangeliyo,waxaana ku laabanayaa todobaadkaan Muqdisho si aan Hooyo ugu kaxeeyo Nairobi,hadii rabi idmo bisha September 2013 ayaan ku soo laaban doonaa Ingiriiska si aan Jaamacada u bilaabo" ayuu yiri wiilka Madaxweyne Garguurte.
Mohamed Garguurte wuxuu dacaayad raqiisa ku sifeeyay hadalka uu Kamaal Dahir siiyay Warbaahinta,wuxuuna tibaaxay inaysan jirin sabab uu qaxooti u noqdo.
"Jaamacad ku taal Ukraine ayaan ka qalin jibiyay,waxaan bartay Daawada ama Medicine,walaalkeey Abdifitah iyo Caruurta kale dhamaantood waxay imaan doonaan London si ay wax uga bartaan" ayuu yiri Mohamed Hassan Sheekh Mohamud.
Agaasimahii Madaxtooyada Somalia Kamaal Dahir Guutaale ayaa hore ugu sheegay Warbaahinta in wiilka Madaxweyne Garguurte iska dhiibay Ingiriiska hasse yeeshee waxaa run noqotay inuu wiilkiisa geeyay London.
©Warbixintaan waxaa isku dubariday- Abdisalan A. Yusuf oo UK jooga,Ziham Mohamud oo Ukraine joogta,waxaa tifaftiray Dahir A. Alasow oo Netherland jooga.